Sekunjalo, umama-mkhwenkwe uyafana. Nabo bulumko, abangavumelani ngokungavumelekanga ukhetho lwabo lonyana wabo.
Inxantathu yothando ethatha i-rapper iTimati iminyaka emininzi ixhalabile kuyo yonke intanethi. Emva kokuzala umculi onobukrakra intombi enhle, u-Alyona Shishkova akazange afike kuTimoti phambi kweofisi ye-registrar. Ingaba iincwadi ezinobungqina obuhle bubeka isohlwayo, okanye ukungalindelekanga kunye nomsebenzi oqhubekayo wengcali, kodwa isibini sabaleka xa intombi yabo uAlice yayingekho nonyaka.
Kodwa ngoku, ecaleni kwidola, unokuqaphela u-Anastasia Reshetova, owayengummangali olahlekileyo waseRashiya. Ngomhla wokuzalwa kwakhe uRamzan Kadyrov, uTimati wathatha kunye nomthandi omtsha, njengokuba indawo yeSoviet Country ibike izolo.
Zonke iimbopheleleko zemfundo ye-Alice encinci zathatha uSimon Yunusov - unina womculi. Umfazi imihla ngemihla ubeka kwi-microblogging yakhe izindaba zakutshanje malunga nendlela uAlisa akhula ngayo kunye nokuphuhlisa.
USimon uhlala exelela ngokucacileyo ngeemfihlelo zokukhuliswa, ngoko ibhulogi yakhe ithandwa kakhulu kumama kunye nogogo.
Kwaye uSimone unomdla kakhulu ...
Umama weTimati wenza ingxoxo ebushushu ngobomi bomntwana wakhe
Intombazana entsha uTimati ishicilela rhoqo iifoto ezimhlophe kwi-Instagram yakhe. Ngaphezulu kweyodwa u-Anastasia Reshetov wagxekwa ngenxa yeempapasho ezinesibindi.
Ngelo xesha, kwi-Instagram Generala Latina iifoto eziqhelekileyo kunye neTimati-ayikho. Kodwa ngokuqhelekileyo unako ukubona imifanekiso uNastya akwenzayo kwigumbi lomculi. Kwaye nangona u-Reshetov uthobekile ngokuzithoba ngendawo yomntu olandelayo, bonke ababhalisile bayakwazi ukubona indawo.
USimone Yunusova unovelwano kwiimvanoveli zendodana yakhe. Umama weTimati ugcina ubudlelwane obuhle kunye no-Alyona Shishkova, kodwa kunye no-Anastasia Reshetova, kubonakala ngathi ukuqhagamshelana nomfazi akukaze kulungiswe.
Namhlanje, kwi-Instagram yakhe, uSimon ulungelelanise ngothando lukaAnastasia emzini kaTimati. Umfazi uthumela isithombe se-Alice encinci ngendlela efanayo njengoko ezinye zeefoto ezithathwe nguRhehetova zenziwe ngokusayinela iphosi:
Bathi ke kule ndawo eyona nto ihamba phambili kwiMoscow! Eyaziwayo ngokusebenza, njengezitebhisi zePotemkin!
Ukuhlaselwa kweSimony Yunusova kukuxabisa ukunyathelisa kwintombi yomfazi. Kwiingxelo zaqala ukuthelekiswa komthonyama ka-Alena Shishkova no-Anastasia Reshetova:
krabik2009 Kuyinto enhle kakhulu ukubona intombazana enhle kule sibuko kunomntwana oneminyaka engama-21 ubudala we-silicone escort-escort intombazana! USimon, ama-5 amanqaku e-podkol And Nastya kufuneka aqonde ukuba ukuthozama komntu ukuhlobisa, u-Alena uyamnceda kakhulu kwaye wangaphandle, kwaye ngaphakathi!
sasha.tikhomirova Simone, ukuba isiteti yinto yonke iRhehetova inokukwazi ukuyenza kule mbolamano, ngoko u-kinky ....
sergeev.konst Reshetova kunye nesithombe sakhe kule sibuko kudala umoya we-brothel kwindlu apho umntwana ehlala khona, akakwazi ukuthetha ukuba ama-boobs akhe angcolise amanye amagumbi? Ngokuqhelekileyo, malunga nemvelaphi ka-Alena, ubonakala njengentloni, ihenyukazi lihenyukazi
vikaa_cat Stebanula Lattice, lihlala libhekiselele kwinqanaba le-fotkaetsya
_missmanya yindawo eyintandokazi yeSieve yeSelphi) ngoko ubonisa ukuba uhlala noTimati, kodwa nokuba uyintombi yakhe.
Ababhalisi be-Alena Vodonaev baxube neBuvoy
UKonstantin Khabensky okwesibini waba ngupapapa
Ukutshixa imifuno enemononi, izityalo kunye nebhotela
IHoroscope yowesifazane-iGemini ngoJuni 2017
Ikhefu kunye ne-meat minced kunye nama-mushroom
Ngaba umntwana kufuneka akholelwe kwimimangaliso?
Ulwaphulo lweengxaki zefestile ukunceda abazali